စိတ္ တစ္ခုရဲ႕ ေအးခ်မ္းရာ | yathar Magazine
စိတ္ တစ္ခုရဲ႕ ေအးခ်မ္းရာ
ဇွန် 29, 2020
အဆုံးသတ် တစ်ခု ဟာ
ဘာဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးလာတယ် ။
ဘယ်လို အဆုံးသတ် မျိုး
အရာဝထ္ထု (သို့) သက်ရှိ တစ်ခု ရဲ့ အဆုံးသတ်ပေါ့….
အဆုံးသတ်တစ်ခုရဲ့ နစ်နာမှုမှာ ခံစားရတဲ့ လူ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခံစားချက် အတိမ်အနက်ကို
ဘယ်သူမှ ခန့်မှန်းလို့ မရနိုင်တာမျိုးပေါ့ ။
ထိခိုက်မှုကို ပြောပါဆိုရင် ခံစားချက်ပါတဲ့ Cells တစ်ချို့ ပျက်သုန်းသွားတာ.
ကံ၊ဉာဏ်၊ဝီရိယ လိုအပ်သလို ခံစားတတ်တဲ့ ရင်ဘတ်တစ်စုံလည်းလိုတယ် ။
ချစ်တာတွေ ၊ လွမ်းတာတွေ
၊ ပျော်စရာ ဟာသ တစ်ချို့က စကားပြောတစ်ခု၊ရယ်မောစရာ တစ်ခုထက် ပို သာ မလာသော
မခံစား တတ်တော့ ဘူး ၊
ဘယ်လို အရာမျိုး ကိုမှ ၊ ဗလာနတ္တိ ဆိုသော စိတ်အပိုင်းအကျိုး အပျက်တစ်ခု ပေါ်မှာ
မျှော်လွင့်နေသော အိမ်မက်ရှည်ကြီး ကို ထပ်တလဲလဲ မက်နေသလိုပဲ ။
ဘာကို မှ ထပ် တလဲလဲ
တောင်းတ မနေ တော့ဝူး ၊ အဆုံးသတ်သွားသော ဆုတောင်းသံ တွေ ကြားမှာ ယုံကြည်ချင်တဲ့
အရာတခု ရဲ့ အဆုံးသတ်က ရပ်စောင့်နေသလိုပဲ ။
ဘာဆိုတာ ဖြေလို့ မရသလိုပဲ ၊ ကိုယ်အသက်စုဗူးလေး ကို မကွဲကြေအောင် ဂရုစိုက်ရင်း
ပြတ်သွားတဲ့ လက်တစ်စုံ ကို မျှော်လင့်နေသလိုပဲပေါ့ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိရဲ့နဲ့ ။
အရေးကြီးတာပါ (ဥပမာ. စိတ်သေတာမျိုးပေါ့)
ကို ပြန်လည် ပျိုးထောင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်မယ့် အချက် (၇) ချက်ကို ပြောပြမှာပါ။
၀မ်းနည်းစရာတွေ ထဲ မှာပဲ အကြိမ်ကြိမ် ပိတ်မမိနေပါစေ နဲ့။ အခြား ပျော်ရွှင်စရာ အကြောင်းအရာတွေ ကို တွေးနေတာဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ် ဝါသနာပါရာ တစ်စုံတစ်ခု ကို စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ပေးတာဖြစ်ဖြစ် အခြားသော အာရုံတစ်ခုခု ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။
အတွက် ကို အရင်တွေးပါ။ အခြားသော ပူပန်စရာတွေကို ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် လွှတ်ချလိုက်ပါ။
ရှင်းရှင်းလေး ထားပေးပါ။ ဖြစ်မလာ နိုင်တော့တာ တွေကို လွှတ်ချဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ပြီး
(၃) ဒိုင္ယာရီ ေရးပါ (စာအုပ္ထဲတြင္သာ )
ကိုယ်ပိုပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက်လာတွေ ၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့ တာတွေ ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ မနေ့ညက ရေးခဲ့ တဲ့ ဒိုင်ယာရီထက် နောက်နေ့ မနက်က ပိုပြီးနေသာထိုင်သာ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ထစ်ခနဲ့ ကို ဝဲ တတ်တဲ့ မျက်ရည် တစ်ချို့ က တစ်ချိန်မှာ စနောက် စရာ အမှတ်တရ တစ်ခု အနေ နဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါ။
နောက်ပိုင်း တော်တော်များများ က Gym တွေ ဆော့လာတာတွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ Zumba ကတာ ကလည်း ကျန်းမာ ရေး အတွက်ရော စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ရစေနိုင်သလို၊ Yoga လေ့ကျင့်ခန်းတွေကလည်း ခန္ဓာကိုယ်သာမက စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လည်း အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
(၅) သဘာ၀ နဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ
ဆိုလိုရင်း က ခရီး ထွက် ဖြစ်အောင် ထွက်ပါ။ သဘာ၀ နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးကို သွားပါ။ တောင်တန်းတွေ စီ ၊ တောအုပ်တွေ စီ နဲ့ ပင်လယ်ကြီး စီကို ခဏ ဖြစ်ဖြစ် ထွက်လာ လိုက်ပါ။ သစ်ရွက်တွေ လှုပ်ခါသွားတဲ့ အသံ ၊ တောင်တန်း တွေ ရဲ့ အထက်က လေတိုးသံ နဲ့ ကမ်းစပ်ကို ခပ်တဲ့ လှိုင်းသံတွေ အထိ ကြားအောင် ခံစားကြည့်ပါ။
ဘာသာရေး အရ ပြောခြင်း မဟုတ်ပဲ ၊ စိတ်ရဲ့ လှုပ်ခါ ပြေးလွှားနေတဲ့ အစဉ်ကို ခေတ္တခဏ ချုပ်တည်းလိုက်ဖို့ တစ်ခုပဲ။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလေး တစ်ခု ထိရောက်တယ်။
(၇) ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။
ပျော်ရွှင်စရာ တွေ အတွက် ကြိုတင် ပြီး အစီအစဉ် ဆွဲပါ ။ Calendar ထဲမှာ ကြိုတင် Date မှတ်ထားပါ ၊ ကြိုပျော်တော့ ပိုပျော်ရတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူ ခရီးတွေ ထွက်ဖို့ Plan ဆွဲထားပါ။
၀ိုင္ အေၾကာင္းသင္ဘယ္ေလာက္ သိသလဲ?
Day of Coffee (2)